Homeụgbọ okporo ígwèKENSİÇİ Rail SystemsMetro
Onye isi oche nke ndi injinia nke obodo (IMO) Izmir Branch, 17 August 1999 Ala Mbara Ala Marmara n'ihi emume 20 nke ọkwa ahụ ekwuputara. Nkwupụta ederede nke IMO Izmir Branch mere dị ka ndị a; Olarak Dị ka ụlọ onye isi injin nkịtị, anyị echefubeghị eziokwu ahụ. [More ...]
Metro Istanbul, 16 Na August 1988 malitere njem ya site na ịrị elu na ihe karịrị ndị njem nde 2 na ndị ọrụ 2.700 kwa ụbọchị. Njem njem 30 nke Istanbullọ Ọrụ Istanbul n’afọ gara aga site na ịkawanye usoro netwọọdụ ụgbọ okporo ígwè n’ọdụ ụgbọ njem ọha na mba n’iru [More ...]
Obodo Bursa Metropolitan, nnukwu ọrụ njem ọha na eze nke obodo Bursaray'da kwalitere ọrụ ahụ ga-abawanye ike 60 ike. Site na sistemụ akara ọhụụ, a ga-ebelata oge njikere ka ọ were nkeji nkeji 2. N'ime ogo ọrụ ndị a 20-22 ọrụ August n'etiti 23.10 [More ...]
Onye isi obodo nke Obodo isi obodo Istanbul Ekrem İmamoğlu gara ebe ọrụ ihe owuwu Be constructioniktaş nke Kabata Mahmutbey metro Line. Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (İBB), nọ na ebe a na-ewu şlọ ọrụ Beşiktaş nke Kabataş - Mahmutbey [More ...]
Ahịrị Hacıosman-Yenikapı, otu n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè abụọ dị mkpa nke Istanbul, anaghị akwụ ụgwọ n'oge ememme ahụ ma na-akwụ ego maka Marmaray. Ebumnuche bụ na arụmọrụ Marmaray bụ n'ozi. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye na-akwụghị ụgwọ rue Yenikapı site na iwere metro Halkalına-akwụ ụgwọ maka mbufe. Eid al-Adha [More ...]
Ebufere Gebze Darıca Metro na Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa
Kocaeli Mayor Assoc. Dr. Tahir Büyükakın mere nkwupụta nye ndị nta akụkọ banyere Project Gebze-Darıca Metro. Mayor Büyükakın kwuru na Project Project, nke nwere ihe ruru 5 Billion TL, ka ebugharị ya na Mịnịstrị nke ofgbọ njem na akụrụngwa. [More ...]
Dịka ịmara, iji banye n'ụgbọ ala ụgbọ ala n'ụzọ dị mfe, ekwesịrị ibute ndị na-agbadata, ọ bụghị naanị maka nkasi obi nke ndị njem, kamakwa maka nkasi obi nke ndị njem chọrọ ịpụ n'ụgbọ ahụ. Na mgbakwunye, iji zere ihe mgbochi iji [More ...]
A tụlere Transportgbọ njem 2030 Izmir
İzmir Obodo ukwu sharedzmir kesara NUMzmir nke 2030 Transportgbọ njem withzmir na ndị nnọchi anya mpaghara mpaghara yana ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị. Transportgbọ njem ọhaneze, ịgbazị ụkwụ na ọrụ igwe kwụ otu ebe ga-ahụ n’afọ ise ndị mbụ bụ mkparịta ụka a. Ndi Izmir nke Obodo [More ...]
Bursa City Hospital Transport Olee otú enye: Turkey si Bursa xnumx'unc obodo ụlọ ọgwụ, City Hospital, e meghere taa site Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. Na Bursa City Hospital nwere ikike akwa zuru oke nke otu puku 10, ụlọọgwụ 355 [More ...]
Obodo isi obodo Metro Istanbul nọ na Ndepụta 500!
Isi Obodo omenala sụgharịrị site Capital-Journal 500 500 Turkey kasị ukwuu onwe ụlọ ọrụ mara ọkwa na ya pụta nke nnyocha. Na njedebe nke nyocha ahụ, 500 so n'etiti ndị nnukwu ụlọ ọrụ Metro Istanbul 390. jisiri ike tinye ndepụta ndị nkịtị. Ọzọ Istanbul gosipụtara Capital-2016 na njiri 2017-500 [More ...]